Fanafihana mitam-piadiana: olona maromaro hanaovana famotorana - ewa.mg
News - Fanafihana mitam-piadiana: olona maromaro hanaovana famotorana
« Olona maromaro hanaovana
fanadihadiana mahakasika ny trangana fanafihana mitam-piadiana tao
Mahatsinjo ny alahady teo iny », hoy ny zandary avy
ao Vohidiala Ambatondrazaka, misahana ny famotorana. Nambarany fa
mbola mitohy ny famotorana mahakasika ny antony namonoana ilay
raim-pianakaviana iny. Maro, hoy izy, ny filazana voaray mahakasika
azy. Ao ireo milaza fa mpividy omby halatra avy ao Amparafaravola,
Moramanga, sy avy ao Tsaratanàna ilay lehilahy. Tsy fantatra ihany
koa na lonilonin’ireo fianakaviana ny zava-misy noho izy
misongadina eo amin’ny tanàna misy azy. Nambaran’ny zandary hatrany
fa mbola mitohy ny fanadihadiana ny raharaha, halalinina izany
aorian’ny fandevenana ilay maty, androany.
Tsiahivina fa lasibatry ny
fanafihan-jiolahy mitam-piadiana ny tokantranon’ireo mpivady monina
ao Mahatsinjo, fokontany Sahanidingana, kaominina
ambanivohitr’Andilanatoby, distrikan’Ambatondrazaka, ny harivan’ny
alahady teo tokony ho tamin’ny 7 ora. Maty noho ny herisetra
nataon’ireo olon-dratsy tamin’izany ny raim-pianakaviana iray raha
natao takalonaina kosa ramatoa vadiny. Araka ny fantatra, niditra
an-keriny tao amin’ireo tompon-trano ireo jiolahy ka nampihorohoro
avy hatrany. Namaly izany anefa ilay lehilahy ka nanaovan’ireo
jiolahy tambabe. Vokany, niharan’ny fampijalin’ireo olon-dratsy izy
ka naratra mafy, mbola voatsindrona antsy ihany koa ny lamosiny ka
nitarika tamin’ny fahafatesany teo no ho eo.
L’article Fanafihana mitam-piadiana: olona maromaro hanaovana famotorana a été récupéré chez Newsmada.
Tsena iraisam-pirenena: ferana ho 250 dolara farany ambany ny vidin’ny lavanila
Tapaka tamin’ny filankevitry ny governemanta, ny 19 aogositra teo, fa hatomboka ny 15 septambra ho avy izao hatramin’ny 31 mey 2021 ny fotoam-pisokafan’ny fanondranana lavanila. Mandritra io fotoana io izany ny fampidirana any amin’ny tsena iraisam-pirenena ny vokatra lavanila avy eto Madagasikara.Tsy misy fanovana ny vidin’ny farany ambany amin’ny lavanila any amin’ny tsena iraisam-pirenena, 250 dolara ny kilao, mandritra io vanim-potoana io. Niaraha-nanapaka tamin’ny volana jolay teo izany teo anivon’ny Filankevi-pirenena momba ny lavanila (CNV). Marihina fa samy ahitana solontena mpikambana ao amin’izany CNV izany ny avy amin’ny minisitera 10, Banky foibe, sy ireo mpandraharaha amin’ity fihariana lavanila ity. Manentana ny mpandraharaha mpanondrana io vokatra io ny minisiteran’ny Indostria, ny varotra sy ny asa tanana (Mica) hanaja ny fepetra rehetra, indrindra ny fampiharana ny vidiny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena.« Misy ny fepetra fanohanana ny eto an-toerana, indrindra ny fiavian’ireny vokatra ireny, fikarohana sy fampandrosoana ny varotra, fisorohana ny vokatra natoraly hosoka, asa maharitra ataon’ireo mpandraharaha amin’izany fihariana izany, ary ny tahan’ny vanila mampiavaka ny lavanila avy eto Madagasikara », hoy Rakotomalala Lantosoa, minisitry ny Mica.Hatramin’izay, zatra manondrana io vokatra io toy ny akora fototra ny mpandraharaha, ankehitriny, efa betsaka ny manitatra manodina izany, mampiakatra ny sandany eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Tanjona ny tsy hampiova ny toeran’i Madagasikara eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, voalohany amin’ny varotra lavanila, 70 %. Hampahafantarin’ny Mica tsy ho ela ny lisitr’ireo matihanina mpanondrana lavanila. R.MathieuL’article Tsena iraisam-pirenena: ferana ho 250 dolara farany ambany ny vidin’ny lavanila a été récupéré chez Newsmada.
Tsipy kanetibe: nanamafy ny sazin’i Beryl i Claude Azema
Mazava ny resaka ankehitriny fa tena nosazin’ny federasiona iraisam-pirenen’ny tsipy kanetibe (FIPJP), Razafindrainiony Béryl, filohan’ny federasiona malagasin’ny tsipy kanetibe (FMP). Nohamafisin’ny fampitam-baovao, nalefan’i Claude Azema, filohan’ny FIPJP, ho an’ny mpanao gazety eto Madagasikara, ny zoma 4 mey lasa teo, ny fanapahan-kevitra noraisin’ny vaomieran’ny fitsipi-pifehena iraisam-pirenena, mandrara an’i Beryl, tsy mahazo misahana na mitantana tsipy kanetibe eto Madagasikara, mandra-pahafatiny. Tsy naharesy lahatra ireo mpikambana eo anivon’ny vaomieran’ny fitsipi-pifehezana ny fiarovantena, nataon’i Beryl, nandritra ny fihainoana azy, tany Almeria Espaina, ny alarobia 1 mey lasa teo. Nohenoina ihany koa Razafindrabe Jean-Luc, saingy hiankina amin’ny federasiona frantsay, ny fanapahan-kevitra mahakasika azy. Misy fiantraikany goavana amin’ny tsipy kanetibe ihany koa ity sazin’i Beryl ity, satria tsy miara-miasa amin’ny federasiona amin’izao intsony ny federasiona iraisam-pirenena, mandra-piandry ny fitsangananan’ny rafitra vaovao hitantana ny tsipy kanetibe malagasy, izay takin’ny FIPJP, hanaraka ny etika sy ny fenitra iraisam-pirenena. Mandra-piandry izany, ny federation sport boule malgache (FSBM), no solontenan’ny federasiona iraisam-pirenena, eto Madagasikara, araka ny nambaran’i Claude Azema. Nomarihiny tao anatin’ilay fampitam-baovao fa hampahafantarina ny minisiteran’ny fanatanjahantena malagasy (MJS) sy ny komity olympika malagasy (Com), ity sazy nomena an-dRazafindrainiony Beryl, ity. Tompondaka L’article Tsipy kanetibe: nanamafy ny sazin’i Beryl i Claude Azema a été récupéré chez Newsmada.
Noho ny fanohanan’ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina (MCC), nanomboka ny 9 aprily 2019 fampirantiana ny tantaran’i Madagasikara ara-toekarena. Eny amin’ny tranom-bokim-pirenena Anosy no ahitana izay hatramin’ny 19 aprily 2019. Hetsika iarahan’ny orinasa misehatra amin’ny fitantanana FTHM Consulting sy ny Oniversite Antananarivo, fakiolten’ny ekonomia, ny fitantanana ary fiarahamonina, departemanta ekonomia izy ity. Ho hita eny amin’ny tranom-bokim-pirenena Anosy ireo tantaran’i Madagasikara ara-toekarena nanomboka ny taona 1960 no mankaty. Lohahevitra noraisin’ny mpikarakara tamin’ity andiany faha-2 ity ny hoe: “ny fitantanana, lakilen’ny fampandrosoana”. Nambaran’ny mpiara-miombona ao amin’ny FTHM, Pierre Bernard Alain fa vitsy ny mahafantatra ny tantara ara-toekarena. Ilaina anefa ny mahafantatra ny zava-misy mba hahaizana mamolavola drafitra tena izy ho fampandrosoana an’i Madagasikara, hoy hatrany ny fanazavany. Nilaza ihany koa izy fa afahana mitsinjo sy manarina ny ho avy ny fahafantarana ny lesoka teo amin’ny tantara. Nanamafy ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, Rakotondrazafy Andriatongarivo Lalatiana nandritra ny lahateny nataony tamin’ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny fampirantiana fa hatramin’izay dia tsy misy miraharaha ny lafiny ara-kolotsaina mihitsy rehefa miresaka fampandrosoana ara-toekarena. Izany indrindra no antony nampiantranoan’ny MCC ity fampirantiana mba hanairana ny sehatra miankina amin’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina mba hanome lanja ny lafiny kolontsaina mba tsy handringa ny fampandrosoana. Manoloana izany dia antsoina ireo mpianatra fa indrindra eny amin’ny lisea, eny amin’ny ambaratonga ambony, mpanapa-kevitra ara-politika sy ara-toekarena, ny olon-rehetra ho avy hitsidika ny fampirantiana. Hisy ny fitetezam-paritra ho ataon’ny mpikarakara ka any Antsirabe no atao ny fampirantiana manaraka. Lynda A. Cet article FAMPIRANTIANA NY TANTARA ARA-TOEKARENA: Hahaizana mitsinjo ny ho avy est apparu en premier sur déliremadagascar.
Tsy maka tahaka befahatany akory fa miaina ny soa fianatra! Any ivelany, saika isam-bolana, misy hatrany ny fifaninanana eo amin’ny tontolon’ny teny sy ny soratra. Ny ankamaroan’izy ireny, loka goavana no zaraina. Tsy mba tahaka izany ny an’ireo tany voazanaka, anisan’izany i Madagasikara. Oviana no mba nisy fifaninanana lehibe momba ny fahaiza-manoratra teto? Oviana no mba nomena mari-pankasitrahana lehibe ireo nahavita be eo amin’ny teny sy ny soratra, sns. Ilaina anefa izany!Matetika, ireo fikambanana na vondrona samihafa no manatanteraka io fifaninanana io. Voafetra ihany anefa ny vitan’izy ireny. Misy aza hetsika tsy tafavoaka ny distrika iray akory. Ankoatra izay, indray mandeha isan-taona ihany vao mety hisy io fifaninanana io noho ny tsy fahampian’ny hoenti-manana eo amin’ireny fikambanana ireny.Taona 2021, fotoana tokony hanatevenana ny efa natao hatramin’izay. Halehibeazina araka izay azo atao ny sehatra ivelaran’ny teny malagasy. Tsy tokony ho ny efa nanao hatramin’izay ihany no andrasana hanohy izany. Entanina manokana ireo orinasa malagasy hanatanteraka ny adidiny manoloana ny fahapotehan’ny teny malagasy. Mila azy ireny ny fampandrosoana sy ny fanomezana aina ny tenindrazana!HaRy RazafindrakotoL’article Fampitiavana ny teny sy ny soratra: taona 2021, ilaina ny fanatanterahana fifaninanana a été récupéré chez Newsmada.
Savate-Analamanga: hatao ny 23-24-25 avrily ny fifaninanana
Araka ny fandaharam-potoanan’ny eo anivon’ny ligin’Analamanga taranja Savate, mikasa ny hanatanteraka fifaninanana izy ireo, ny 23 hatramin’ny 25 avrily ho avy izao. Fifaninanana hatao etsy amin’ny Pompiers Tanjombato ary efa am-pikarakarana tanteraka ny lafiny ara-teknika. Mialoha io daty io, vinavinaina hatao ny 22 avrily izao ny fandanjana ireo mpifaninana eny amin’ny akademia nasionaly ny Spaoro Ampefiloha. Ny fisoratana anarana izay mbola misokatra hatramin’izao, raha ny fanazavana. Nanamafy anefa ny avy eo anivon’ny ligin’Analamanga fa miankina indrindra amin’ny fanapahan-kevitra raisin’ny fanjakana, mahakasika ny fepetra amin’ny fihanaky ny Covid 19 ny hahatanteraka na tsia ity fifaninanana kasain’izy ireo tanterahana ity. Vonona ny hanaraka izay lamina apetraka ny ligy ary raha afaka manatanteraka hetsika ara-panatanjahantena soa aman-tsara, dia vonona ny hanaja ny fepetra ara-pahasalamana apetraka rehetra izy ireo. Hampitaina miandalana ihany ny fanapahan-kevitra horaisina sy ny fandaharam-potoana, raha misy ny fiovana, araka ny fanazavana hatrany. Tsiahivina, efa nahitana fihemorana ity fifaninanana ity, izay saika hatao ny 16 avrily kanefa izao nahemotra herinandro izao. Andrasana, araka izany, ny hahatanterahany na tsia ho amin’io daty voatondro io. Mi.RazL’article Savate-Analamanga: hatao ny 23-24-25 avrily ny fifaninanana a été récupéré chez Newsmada.